Maraykanka oo dib u billaabay howlgalladii cirka ee Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Maraykanka oo dib u billaabay howlgalladii cirka ee Soomaaliya
Dowladda Mareykanka ayaa qiratay in ay Soomaaliya ka fulisay 63 weerar oo cirka ah oo uu lala beegsaday Al-Shabaab sanadkii 2019 halka 53 duullan ay fuliyeen sanadkii la soo dhaafay.
WASHINGTON - Ciidamada kumaandooska Soomaaliya iyo kuwa Daraawishta Galmudug, ee dagaalka kula jira Kooxda Al-Shabaab, ayaa caawimaad dhanka cirka ah ka helay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka, markii ugu horeysay lix bil kadib.
Pentagon-ka ayaa gelinkii dambe ee Talaadadii, xaqiijiyay in ciidamada Mareykanka ay ka dambeeyeen weerar ka dhacay meel u dhow Gaalkacyo, oo qiyaastii 580 kiiloomitir waqooyiga ka xigta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Sarkaal ka tirsan Wasaaradda Gaashandhigga Mareykanka ayaa sheegay in duqeyntaas fulinteeda loo cuskaday shirciyo hore u jiray, si loo difaaco xogagga Mareykanka xulifada la ah, waxaana la fuliyay duqeyntaas iyada oo aysan jirin ciidan Mareykan ah oo ku sugan dhulka.
Afhayeenka waaxda gaashaandhigga Mareykanka Cindi King ayaa xaqiijiyay in aysan jirin ciidamo Mareykan ah oo la socday ciidamada Soomaaliya intii uu socday howlgalkaan.
Weerarkii cirka ee Talaadadii lala beegsaday Al-Shabaab ayaa ah duqeyntii ugu horreysay ee noocan oo kale ah muddo lix bilood ah, waana tii ugu horreysay oo la qaado tan iyo markii uu xafiiska qabtay Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden.
Dowladda Mareykanka ayaa qiratay in ay Soomaaliya ka fulisay 63 weerar oo cirka ah oo uu lala beegsaday Al-Shabaab sanadkii 2019 halka 53 duullan ay fuliyeen sanadkii na-weydaartay 2020.
Tan iyo markii uu xilka qabtay madaxweynaha cusub ee Joe Biden, saraakiisha Soomaaliya waxay dhowr jeer ku baaqeen in dib loo billaabo duqeymaha diyaaradaha Mareykanka.
Afhayeenka Ciidamada Soomaaliya Korneel Cali Xaashi Cabdinuur ayaa sheegay bilowgii todobaadkan inuu rajeynayo in Mareykanku uu dib u billaabi doono duqeymaha, gaar ahaan bartilmaameedyada fog iyo aagagga aysan gaari karin ciidamada lugta ee Soomaaliya.
Toddobaadkii la soo dhaafay, militariga Mareykanka wuxuu siiyay ciidamada gaarka ah ee Danab, lix gawaarida gaashaaman ah ee loo yaqaan (APCs), taaas oo sare u qaaday tirada gawaarida awoodda u leh inay iska difaacaan qarxyada la farsameeyay (IEDs), ee ciidamadu hore u heysteen.
"Waxaan haysanna AK-47 (qoryaha otomaatiga ah)," ayuu sarkaal sare oo ka tirsan millatariga Soomaaliya u sheegay VOA-da adduuna la hadasha. “Waxaan u baahanahay hub dheeri ah sida qoryaha daran dooriga u dhaca, iyo madaafiic RPG”. Ayuu yiri.
"Waxaan sidoo kale u baahanahay taageero caafimaad, labis, xeryo ay ciidamadu seexdaan oo ku nastaan, iyo raashin," ayuu raaciyay.
Taliyayaasha sare ee militariga Mareykanka ayaa sidoo kale ka digay halista sii kordheysa, qaar waxay qirayaan in go'aanka maamulkii Trump uu kaga saaray ku dhowaad dhammaan ciidamadii Mareykanka ee ku sugnaa Soomaaliya uu xaaladda uga sii daray.
Hayeeshee, Diiwaanada ay hayaan Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), oo ah koox cilmibaaris oo aan faa'iido doon ahayn oo fadhigeedu yahay Mareykanka, ayaa sheegeysa in halista Al-Shabaab ay ku hayaan dadka rayidka ah ee Soomaaliya ay dhab ahaan hoos u dhacday intii ay maqneyd duqeynta.
ACLED waxay sheegtay inay heshay 155 dhacdo oo Al-Shabaab ay ku bartilmaameedsadeen dad rayid ah lixdii bilood ee ka horeysay inta uusan Biden la wareegin xafiiska, halka 90 dhacddo la diiwaan galiyay lixda bilood ee uu madaxweynaha yahay.